China 99% DMAA 1,3-dimethylamylamin HCL poda CAS 105-41-9 fekitori nevatengesi | Dzidziso
99% DMAA 1,3-dimethylamylamin HCL upfu CAS 105-41-9
Chemical Zita: 1,3-dimethylamylamin HCL
Mashoko anoreva zvakafanana: 99% DMAA; 1,3-Dimethylpentylamine hydrochloride
CAS HERE. 105-41-9
DMAA, inokurudzira inowanzoshandiswa kuwedzera simba rekushanda nesimba. 1,3 dimethylamylamine inowanzo kuwanikwa mu preworkout zvinowedzera, senge Jack3d uye SciVation Quake 10.0. Kuwedzerwa kwesimba kubva kuDMAA kunotora maawa makumi matatu nemashanu pasina kuparara kana kuneta. Kusiyana ne caffeine uye zvimwe zvinokurudzira, DMAA haikusiye iwe wakaneta mushure mokunge chiitiko chacho chapera.
DMAAinogona kugadzirwa nemakemikari. Izvo zvataurwa kuti DMAA inowanikwawo zvakasikwa mumafuta eiyo geranium chirimwa (Pelargonium tombolens). Pachivanhu, chirimwa ichi chave chakakosha muindasitiri yezvinonhuwira nekuda kwehunhu hwaro hunofadza. Zvisinei, mitsara yakawanda inoratidza kuti DMAA haisipo mumafuta egeranium uye iyo DMAA iripo mune zvinowedzera zvinowanzoitika kubva kunogadzirwa masosi
Nutritional supplement, chikafu chinowedzera, chikafu chinowedzera, kupisalh zvekuwedzera zvekuwedzera, mishonga mbishi zvinhu. zvekuwedzera zvemitambo, zvemitambo zvinovaka muviri zvekuwedzera, kuvaka muviri.
1. Rudzi rwekuwedzera chikafu.
2.Iinogona kuvandudza iyo aerobic metabolism yemhasuru uye zvakanyanya kuwedzera mhasuru simba uye kutsungirira kubva pakudya chete.
3. Inogona kushandiswa sekusimudzira zvinovaka muviri.
4. Icho chimwe chezvinhu zvinozivikanwa zvikuru uye zvinoshanda zvinovaka muviri pamwe chete nechinhu chakakosha chigadzirwa kune vanovaka muviri.
5. Inoshandiswawo zvakanyanya nevamwe vatambi, vakaita sevatambi venhabvu, vatambi vebhasikiti zvichingodaro.
1.Vemishonga intermediates, yakanaka organic synthesis uye catalyst, zvigadzirwa zvekuchengetedza hutano, nezvimwe.
2. Wedzera simba uye nekuvandudza simba remuviri
3. Inoshandiswa pakurema kirasi uko iwe unogona zvakanyanya kudzikisira chishuwo chinodzvinyirira mhedzisiro inokonzerwa nekupisa.
4. Zvakare zvinogona kushandiswa sezvimwe zvinoshandiswa nemishonga yekuwedzera.
25KG / dhiramu, kana maererano nezvaunoda.
chena sekristaro upfu
Kutenderera kwakananga [α] D20 °
-11.3 ° ~ -12.1 °
Mamiriro ekugadzirisa (Transmittance)
Mamwe amino acids
Zvakasara pamusoro kuvesa
.20.25EU / ml
Pashure: Polyvinylpyrrolidone k30 / PVP K-30 cas 84057-81-8
Zvadaro: Yakachena kuchena 2-Adamantanone 99% CAS 700-58-3
Mutengo Wakanaka Phenylephrine Hydrochloride Cas 61-7 ...
99% min Trimethyl Phloroglucinol / 1,3,5-Trimetho ...
GMP fekitori inopa yakanaka mutengo Sulfadimethoxine p ...
Pharmaceutical giredhi 99% Lanosterol ine yakanaka p ...
yakakwira giredhi 2,4-Dichlorophenol 99% mu organic sy ...
Akanaka mutengo Mishonga intermediates 99% Nic ...